ဒူဒူကြီး: Flow metering - DIVA direct in-line variable flow meter
Flow metering - DIVA direct in-line variable flow meter
direct in-line variable area flow meter ဆိုတဲ့၊ DIVA flow meters တွေဟာ၊ SLVA flow meter တည်ဆောက်ပုံကို အခြေခံပြီး၊ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ SLVA flow meter တွေမှာ precision shaped cone ဟာ၊ spring resistance ကိုဆန့်ကျင်ပြီး၊ axially direction နဲ့ ရွေ့လျှားတဲ့ အခါ၊ cone ရဲ့ရွေ့လျှားမှုမှကြောင့် pass area ဆိုတဲ့ annular area ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါါပါတယ်။
Fig. Traditional flow metering system
SLVA flow meters တွေမှာ pressure drop မှတဆင့်၊ differential pressure ကို flow rate အဖြစ်ပြောင်းလဲ ဖတ်ယူပါတယ်။ DIVA flow meters တွေမှာတော့၊ cone ရွှေ့လျှားမှုမှတဆင့် ဖြစ်ပေါါ လာတဲ့၊ force deflection မှတဆင့်၊ flow rate ကိုဖတ်ယူတဲ့အတွက်၊ DP cell ဆိုတဲ့၊ differential pressure transmitters တွေကိုတတ်ဆင်ကာ၊ flow rate ကိုဖတ်ယူဖို့ မလိုအပ်တော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Fig. DIVA flow meter
cone ရဲ့ deflection ဟာ၊ high quality strain gauges အပေါါသက်ရောက်ပြီး၊ 'strain gauges' မှာပေါါပေါက်လာတဲ့ strain နဲ့ stress ဟာ၊ flow နဲ့ proportional တိုက်ရိုက်အချိုးကျပြီး၊ flow stream မြင့်မားလေ၊ force မြင့်မားလေဖြစ်ပါတယ်။ DIVA flow meters တွေမှာ၊ internal temperature sensor ကိုထည့်သွင်းထား တဲ့အတွက်၊ flow indicating သာမက၊ density compensation ကိုပါရရှိနိုင်ပါတယ်။
DIVA flow meters တွေမှာထည့်သွင်းထားတဲ့၊ internal temperature sensor ဟာ၊ integral Pt 100 temperature sensor ဖြစ်ပြီး၊ flow ရဲ့ upstream velocity ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာမယ့်၊ flow profile effect ကိုလျှော့ချဖို့၊ orifice နဲ့ cone ကို၊ precision design အနေနဲ့ ထုတ်လုပ် တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ surge သို့မဟုတ် excessive flow ကြောင့်၊ spring damage မဖြစ်စေရန်၊ over range arrangement ကို ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ spring အပါအဝင်၊ အသုံးပြုမယ့်အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်၊ stainless steel သို့မဟုတ် inconel material ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
DIVA flow meter ဟာ၊ integrated loop-power device ဖြစ်ပြီး၊ uncertainty guide line - EN ISO/ IEC 17025 standard အရ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ strain gauges မှာဖြစ်ပေါါတဲ့၊ strain ကို၊ integral electronic unit မှတိုင်းတာပြီး၊ flow rate အဖြစ်ပြောင်းလဲဖော်ပြ ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ accuracy အနေနဲ့ ± 2% of actual flow နဲ့ ± 0.2% FSD ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ DIVA flow meters တွေဟာ၊ self-contained unit တွေဖြစ်ပြီး၊ meter ရဲ့ uncertainty value ကို၊ complete system အနေနဲ့ဖော်ပြ နိုင်ပါတယ်။
အခြား flow meters တွေမှာတော့ pipeline unit မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကိုသာ၊ individual uncertainty value အနေနဲ့ သာဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ DP cell လို associated equipment တွေရဲ့ uncertainty value ကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ turn-down ration အနေနဲ့ (50:1) အထိရှိပြီး၊ operational range အနေနဲ့ maximum flow ရဲ့ 98 % အထိ၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Fig. Flow orientation
DIVA flow meter တွေမှာ fluid ရဲ့ flow orientation ဆိုတဲ့ flow direction ကြောင့်၊ operating performance မှာအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါါ နိုင်ပါတယ်။ flow orientation ဟာ horizontal direction အနေ အထားနဲ့စီးဆင်းတဲ့အခါ၊ meter ရဲ့ turn-down ratio နဲ့ pressure limitation ဟာ၊ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ flow orientation ဟာ vertically downward direction အနေအထားနဲ့စီးဆင်းတဲ့အခါ၊ turn-down ratio မပြောင်းလဲပေမယ့်၊ pressure limitation ကျဆင်းသွားပြီး၊ vertically upward direction အနေအထားနဲ့စီးဆင်းတဲ့အခါ၊ turn-down ratio နဲ့ pressure limitation ပါကျဆင်းသွားတဲ့ အတွက်၊ meter ရဲ့ operating performance ကျဆင်းသွားတယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 21:10